Uwe mmiri ozuzo → Na-arụ ọrụ uwe • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
Uwe mmirina anyị na-enye gị na nke anyị ụlọ ahịa ejiri ihe eji eme ihe nke oma di nma ma buru oke ya. Ọ bụ otu n'ime ụdị uwe ndị na-ewu ewu n'oge mgbụsị akwụkwọ na oge oyi, na-esote ajị anụ na-ekpo ọkụ na nke ọma.
Akwụkwọ mmiri ozuzo a kwadoro
E keela ozu mmiri ozuzo n'ọtụtụ ụzọ iji mee ka ọchụchọ ahụ dị mfe. The agwaogwa anyị na-enye ga-eji na ọtụtụ ọrụ. Nnukwu nhọrọ na asọmpi asọmpi ga-enye gị ohere ịchọta ngwaahịa kwesịrị ekwesị.
Lee kwa: Ihe mkpuchi kọmputa - gịnị ka ọ bụ?
Widedị dịgasị iche iche maka oge ọ bụla na ụlọ ọrụ
Igwe mmiri ozuzo na-eguzogide mmiri na-enye ekele maka akwa dị iche iche dị n'ime nke emebere iji mee ka onye ọrụ ahụ nwee ntụsara ahụ ma dị mma.
Anyị na-enye: set, mkpuchi, jaket, uwe ogologo ọkpa, ponchos. Ihe kachasị ewu ewu bụ usoro nke na-eme ka nhọrọ ahụ dị mfe site na ịhapụ mkpa ịhọrọ ihe ọ bụla. Anyị na-enye ọtụtụ ụdị nha, yana akwa zuru ụwa ọnụ.
Setịpụrụ nke ihe eji agbanwe agbanwe. Ntọala ahụ gụnyere, n'etiti ndị ọzọ site na dungarees na jaketị. Ha na-enye nchebe zuru oke megide mmiri - a na-ejide ya na akwa mpụta, yana ihe ndị ọzọ dị ka akpa akpa na-enyere aka chebe ihe zoro ezo ka mmiri ghara ịmị. Uwe mmiri ozuzo na-enye ohere ikuku ikuku n'efu, nke achọrọ iji belata ihe ize ndụ nke oke ọsụsọ.
Uwe mmiri ozuzo
Kootu mmiri ozuzo na-enye nchebe zuru oke megide mgbochi mmiri site na iji ihe ndị dị elu. Ojiji nke ihe ndị a sụgharịrị ịbụ enweghị atụ na oke iguzogide mmebi. Onyinye ahụ gụnyere ọtụtụ ụdị - site na ndị dị mkpa maka zlotys ole na ole ruo ndị dị oke ọnụ ma sie ike karịa na-ejide onwe ha, na-eguzogide nrụrụ.
Jaketị mmiri ozuzo bụ ngalaba nwere ọtụtụ ngwaahịa sitere na ndị nrụpụta kachasị mma maka ndị ahụ na-elekwasị anya na ntachi obi na ojiji kpụ ọkụ n'ọnụ. Jaketị ahụ na-agbaso ọtụtụ ụkpụrụ, ụfọdụ ụdị nwere ihe na-atụgharị uche na-eme ka ọhụhụ na nchekwa dị. Karịsịa ihe kwesịrị ịrịba ama bụ ụdị mgbanwe na-enye nkasi obi zuru oke n'ọnọdụ ọnọdụ mgbatị ahụ pụrụ iche.
Nchebe megide ihe ndị dị na mpụga
Na-arụ ọrụ mmiri ozuzo, nke ị ga-ahụ n'ụlọ ahịa anyị, na-enye nchebe dị ukwuu pụọ na mmiri ozuzo ma ọ bụ ifufe. Nnukwu uru ya bụ nkasi obi nke iji, nke anaghị egbochi nnwere onwe ịgagharị. Oke kwesịrị ekwesị na-enye ohere maka mmegharị na-enweghị nsogbu n'oge ọrụ ma ọ bụ ọrụ ndị ọzọ. Ọ dịkwa mma ị attentiona ntị na ezigbo nkwụsi ike na iguzogide mmebi. Mmepụta uwe site na ụlọ ọrụ ndị ọkachamara na mmejuputa nke ngwa ọrụ ọkachamara chọrọ ga-eme ka ikuku ikuku dị mma, si otú ahụ belata ihe ize ndụ nke ịsụsọ. Ekele maka ihe ndị a, a na-ebelata oge ịzụta uwe ọhụrụ.
Udiri mmiri ozuzoUwe mmiri ozuzo castoramaUdiri mmiri ozuzo decathlonUwe mmiri ozuzo motoUwe mmiri anaghị ezoUwe mmiri ozuzo motouwe ịchụ ntauwe mmiri na-echebeUwe mmiri na-egbochiuwe mmiriuwe ime mgbanakauwe ụmụ nwanyịUdiri mmiri ozuzo decathlonuwe mmiri maka ụmụakaUwe mmiri ozuzo maka ndị ọgba tum tumuwe ụmụakauwe robaUwe mmiriUwe mmiri KoszalinUwe mmiri KrakowUwe mmiri ozuzo motoUwe mmiri ozuzo motoUwe mmiri ozuzo maka ọgba tum tumUgba mmiriuwe mmiri maka azụUwe mmiri ozuzo maka skooteruwe ime mmiri prouwe mmiri na-arụ ọrụallegro ọrụ uwe mmiriụmụ nwanyị uwe ejijiuwe ime mmiri n'èzíuwe mmiriuwe agha mmiripvc mmiri iyiuwe akwa mmiri jaketịna-arụ ọrụ uwe mmiriuwe mkpuchi mmiriuwe mmiri anaghị egbochiuwe azụ na-egbochi mmiriuwe agha mmiriUwe mmiri iyiUwe mmiri ozuzo motouwe mgbochi mmiriuwe mmiri na-arụ ọrụ